Ogo, ịdị elu, akụkụ kwụ ọtọ na igwe ojii | Netwọk Mgbasa Ozi
Ogo, ịdị elu, akụkụ kwụ ọtọ na ọkwa igwe ojii
A. Esteban | | Meteorology, Igwe ojii
Ọ na-adịkarị mkpa ịkọwa ọkwa ọkwa nke akụkụ ụfọdụ nke igwe ojii dị. Iji gosi ọkwa dị otu a, enwere ike iji echiche abụọ, nke altura na nke elu.
Elu nke otu isi (dịka ọmụmaatụ: isi igwe ojii) bụ oghere kwụ ọtọ n'etiti ọkwa nke saịtị nyocha na ọkwa nke ebe ahụ. Ekwesiri ighota na enwere ike ichota ebe nlere anya na ugwu rue ugwu. Kama nke ahụ, elu nke otu isi bụ oghere kwụ ọtọ n'etiti etiti oke osimiri na ọkwa nke isi ahụ. Ndị na-ekiri ihe na-eme elu na-ejikarị echiche nke ịdị elu. Otú ọ dị, ndị na-ekiri ụgbọelu na-ezo aka n'ogo. Ihe vetikal akụkụ igwe ojii bụ oghere kwụ ọtọ n’etiti ọkwa ya na nke elu ya.
Igwe ojii dị n'ogo n'etiti ọkwa mmiri na ọkwa tropopause. Ọkwa nke tropopause ọ na-agbanwe na ohere na oge; ya mere, igwe ojii dị n’elu na mbara-igwe karịa na etiti na ịdị-elu latitudes. Anyị na-echeta na tropopause bụ ókè dị n'etiti troposphere na stratosphere.
Site na mgbakọ, ekewawo akụkụ ikuku ebe igwe ojii na-adịkarị gaa na ọkwa atọ akpọrọ, n'otu n'otu elu, ọkara na ala. A na-akọwa ala ọ bụla site na ọkwa ọkwa nke igwe ojii nke ụdị ụfọdụ na-eme ọtụtụ oge. Ala ndị ahụ jikọtara ọnụ na oke ha dị iche na oke.
Dị ka ihe atụ, na pola mpaghara ọkwa dị elu dị n'agbata kilomita 3 na 8 ma na mpaghara mpaghara equatorial dị n'etiti 6 na 18 km.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Ogo, ịdị elu, akụkụ kwụ ọtọ na ọkwa igwe ojii
Udọn, oyi na sublimation
Albedo na Earth's Energy Balance